ब्ल्याक फ्राइडे र साइबर सोमबार: अधिक बेच्न अनलाइन मार्केटि sell कुञ्जीहरू
घर » ईमेल डाटाबेस ब्लगहरू » डिजिटल मार्केटिंग कम्पनी फ्लोरिडा » ब्ल्याक फ्राइडे र साइबर सोमबार: अधिक बेच्न अनलाइन मार्केटि sell कुञ्जीहरू
फेब्रुअरी 14, 2019 in डिजिटल मार्केटिंग कम्पनी फ्लोरिडा ट्याग कालो शुक्रवार र साइबर सोमबार by जकारिया हुसेन
समयमा कालो शुक्रवार र साइबर सोमबार उपभोक्तावादको एक ठूलो तरंग निकालेको छ। यद्यपि मौलिक रूपमा यो एउटा अमेरिकी चलन थियो, हालसालैका वर्षहरूमा उनीहरूले विश्वभर कडाई हालेका छन् र पक्कै पनि यसमा हाम्रो देश पनि समावेश छ।youtube दृश्यहरू खरीद गर्नुहोस्
ईकमर्स, कम्पनीहरू र अनलाइन उपस्थितिको साथ धेरै ब्रांडहरू, यी महत्त्वपूर्ण दिनहरूमा क्रिसमस प्रि-अभियान सुरु गर्न र ठूलो छुटको साथ पदोन्नति गर्ने ठूलो अवसर देख्छन्। जस्तो कि प्रतिस्पर्धा उच्च र समय सीमित छ (किनकि तिनीहरू केवल केहि दिनहरू हुन्), डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिहरूले उनीहरूको बजेट बढाउँछन् र कालो फ्राइडे र साइबर सोमबारमा फोकस गर्छन्।
प्रयास यसको लायक छ। वर्टेनद्वारा आयोजित स्पेनको ब्ल्याक फ्राइडे को तेस्रो वेधशाला अनुसार7इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूमध्येबाट 10 ले यस मितिमा खरिद गर्नेछ र औसत लागत 222 यूरो हुनेछ।
सबैभन्दा पहिले, यस बर्षको मितिहरूको लागि साइन अप गर्नुहोस्: कालो शुक्रवार शुक्रवार शुक्रवार नोभेम्बर 23 हुनेछ र साइबर सोमबार सोमबार, नोभेम्बर 26, 2018 हुनेछ .
कालो फ्राइडे र साइबर सोमबार के हुन्?
यो कालो शुक्रबार केही वर्ष पहिले हामीले केहि ध्वनि सुनेन र अब यो हो अनलाइन बिक्री को लागी धेरै मजबूत प्रोप र
यसको मूल हो संयुक्त राज्य अमेरिका 50s मा फिर्ता, र सँधै शुक्रवार शुक्रबार मनाइन्छ धन्यवाद। कारण यो हो कि त्यो दिन संयुक्त राज्यमा छुट्टी हो, त्यो हो कि मानिसहरू काम गर्दैनन् तर स्टोरहरूले अवसर खोल्छन् र क्रिसमस शपिंगको मौसमबाट छुट पाउन छुट दिन्छन्। यति धेरै यसको सफलता थियो, कि पसलहरू "रातो नम्बर" बाट "कालो नम्बर" मा जान सफल भए, त्यसैले मितिको नाम।
स्पेनमा यो आर्थिक संकटको बिचमा छुट्टिहरु भन्दा पहिले उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि कार्यान्वयन गर्न चाहिएको थियो, तर अब यो आफ्नै इकाईको साथ एक दिन भएको छ र यसले हड्तालको लागि काम गर्दछ। क्रिसमस किनमेल .
तुलनामा, साइबर सोमबार धेरै नै भर्खरको हो, किनकि यो 2005 मा पहिलो पटक आयोजित गरिएको थियो। यो विचार भनेको अनलाइन शपिंगलाई प्रोत्साहित गर्नु थियो, जुन त्यस समयमा त्यस्तो लोकप्रियताको मज्जा लिइएको थिएन। यो सोमबार मनाइन्छ किनकि त्यस समयमा धेरै प्रयोगकर्ताहरूको घरमा उच्च-स्पीड इन्टरनेट थिएन र त्यसैले अफिसमा अनलाइन शपिंगको फाइदा उठायो।
त्यसकारण, हामी देख्छौं कि सुरुमा विचार ब्ल्याक फ्राइडे र डिजिटल साइबर सोमबारमा शारीरिक खरीद गर्नु थियो, तर आज यो भिन्नता स्पष्ट छैन र प्रस्तावहरू एक हप्ता वा बढि विस्तार गर्न सकिन्छ।
यो पनि जिज्ञासु छ कि साइबर सोमबार पछि आविष्कार हो, यसको लोकप्रियता "ब्ल्याक फ्राइडे" अनसेट गर्न सफल भएको छ। एक्सएनयूएमएक्समा, सोमबारको बिक्री 2017 अर्ब डलरमा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर भएको थियो, जबकि शुक्रबार "मात्र" छुटको साथ 6.6 अरब डलर उत्पादनहरू बेचिए।
हाम्रो देशमा साइबर सोमबार पहिलो पटक अमेजनद्वारा एक्सएनयूएमएक्समा आयोजित गरिएको थियो, र यद्यपि सुरुमा बिक्री धेरै अपमानजनक थिएन, तर यसले यसको परिणाम वर्षौं बर्ष सुधार भएको देखिएको छ। अंश मा यो अर्थव्यवस्था को सुधार को कारण हो, तर पनि अनलाइन किन्न प्रयोगकर्ताहरु को डर को घाटा।
किनमेल गर्ने बानीहरू परिवर्तन भएको छ
उपभोक्ताहरू अझ अगाडि देखिएका छन् र तिथिहरूको जस्तै फाइदा लिन कालो फ्राइडे र साइबर मन्डर अझ अग्रिम किन्नको लागि, किनकि बार्गेनहरू काफी रसीला छन्।
यो सबै भन्दा बढी प्रयोग भएको समर्थन गर्दछ यी मितिहरूमा विज्ञापन लगानी गर्ने समयमा हुन्:
ईमेल मार्केटिंग (92.3%)
सामाजिक नेटवर्कहरू - सशुल्क मीडिया (84.6%)
मोबाइल प्रदर्शन (71.8%)
प्रदर्शन र लि links्क (69.2%)
खोज मार्केटिंग (59%)
मोबाइल अनुप्रयोगहरू (20.5%)
भिडियो मार्केटिंग (17.9%)
र जहाँ लगानी समर्थन गर्दछ अभियानमा सबैभन्दा बढ्छहो:
सामाजिक नेटवर्कहरू - सशुल्क मीडिया (33.3%)
ईमेल मार्केटिंग (25.6%)
प्रदर्शन र लि links्क (23.1%)
खोज मार्केटिंग (20.5%)
मोबाइल अनुप्रयोग (17.9%)
मोबाइल प्रदर्शन (12.8%)
भिडियो मार्केटिंग (5.1%)
मिडियाको श्रेणीकरण जुन कम्पनीहरूले स्पेनको ब्ल्याक फ्राइडेमा उनीहरूको विज्ञापन लगानी वृद्धि गर्‍यो, स्टिस्टाका अनुसार
2018 मा कालो शुक्रवार र साइबर सोमबारको लागि भविष्यवाणी
बजारका लागि ब्ल्याक फ्राइडे र साइबर सोमबार ठूलो चासोका मितिहरू हुन्, किनकि उनीहरूले प्रस्तावहरूमा रुचि राख्ने प्रयोगकर्ताहरूको बढ्दो संख्यालाई आकर्षित गर्दछन्। उपभोक्ता बनेका छन् अधिक दूरदर्शी र ब्ल्याक फ्राइडे जस्ता मितिहरूको फाइदा लिनुहोस् अधिक अग्रिम किन्नको लागि, किनकि सम्झौता पर्याप्त रमाईलो छ।
डिजिटल शपिंग प्लेटफर्महरू र ई-कॉमर्सहरूले नेटवर्क र भुक्तान विधिमा तिनीहरूको उपस्थिति सुधार गरेको छ। थप रूपमा, सहस्राब्दी जेनेरेसन र Z ले उपभोक्तालाई डिजिटल रूपले मानकीकृत गरेको छ।
भर्खरको बहसमा "कसरी 'ब्ल्याक फ्राइडे' को लागी सफल डिजिटल रणनीतिहरु लागू गर्ने" , मेकिंग साइन्स द्वारा आयोजित र गुगलका प्रतिनिधिहरू, हबिटिसिमो र ब्ल्याक लिम्बा, केहि धेरै चाखलाग्दो डाटालाई अर्को ब्ल्याक फ्राइडेको पूर्वानुमान र हालको अनलाइन मार्केटिंगमा पार्ने प्रभावको बारेमा औंल्याइएको थियो। नोट लिनुहोस्:
अनुमानका अनुसार अर्को ब्ल्याक फ्राइडेले अनलाइन बिक्रीमा 1300 मिलियन यूरो उत्पादन गर्दछ, 13% भन्दा 2017% बढी।
वर्षको इन्टरनेट बिक्रीको 5.3% यस मितिमा बनेको छ।
"कालो फ्राइडे" र "साइबर सोमबार" सर्तहरूको खोजी भोल्यु 14 वर्षहरूमा4ले गुणा गरेको छ। यस शपिंग अवधिमा सबैभन्दा खोजिएको कोटी भनेको टेक्नोलोजी हो, जसले कुलको 58% प्रतिनिधित्व गर्दछ, त्यसपछि फेसन 18% र 6% सँग खेलहरू।
यसको अंशको लागि, वर्टेनको स्पेनमा तेस्रो कालो फ्राइडे वेधशाला हाम्रो देशमा यस मितिमा खाता लिनको लागि केहि डेटा प्रदान गर्दछ:
समुदायहरू जुन 2017 बाट डाटामा आधारित यस अभियानमा सबैभन्दा अधिक खर्च गर्दछन्, ला रिओजा, एरागेन, क्यानरी टापु र अन्डालुसिया हुन्। सबैभन्दा कम क्याटालोनिया, गलिसिया, एक्स्ट्रेमादुरा र क्यास्टिला वा लियोन हुन्।
47% प्रयोगकर्ताहरूले यी मितिहरूमा क्रिसमस भन्दा धेरै खरीद गर्नेछन् (डेटामा आँखा!)।
मूल्य प्रयोगकर्ताहरूको 88% का लागि मुख्य प्रेरणा हो।
80% अनलाइन खरीद गर्दछ।
र कालो फ्राइडे खरीदहरूको 18% (हरेक पाँच वस्तु मध्ये लगभग एक) फिर्ती वा आदानप्रदान हुन्छ, त्यसैले यी मितिहरूको लागि तपाईंको फिर्ती नीतिको बारेमा स्पष्ट हुनु सधैं महत्त्वपूर्ण छ।
कालो शुक्रबार र साइबर सोमबारको समयमा डिजिटल मार्केटिंग
कसरी ब्ल्याक फ्राइडे र साइबर सोमबारको समयमा अधिक बेच्ने
के तपाइँलाई यस ब्ल्याक फ्राइडेमा तपाइँको अनलाइन मार्केटिंगबाट अधिक लाभ लिनको लागि विचारहरू चाहिन्छ? यी सुझावहरूको नोट लिनुहोस्:
1. तपाईंको ईमेल मार्केटिंग अभियानको साथ मितिमा अगाडि जानुहोस् । जबकि प्रतिस्पर्धा अझै के गर्ने निर्णय गरीरहेको छ, तपाईं आफ्नो मेलिंग सूची सचेत गर्न सक्नुहुन्छ शानदार छुट तपाईंको प्रतीक्षामा। अधिकतम प्रभावकारिता प्राप्त गर्न, हुकको साथ मुद्दा खोज्नुहोस्, विभिन्न प्रकारका ग्राहकहरूको लागि सन्देश निजीकृत गर्नुहोस् र शिखर समयमा ईमेल पठाउने कुरा निश्चित गर्नुहोस्।
2. साइबर सोमबार पछि तपाईंको अवतरण पृष्ठ नहटाउनुहोस् । यदि तपाईं ब्ल्याक फ्राइडेका लागि स्थायी अवतरण पृष्ठ सिर्जना गर्नुहुन्छ भने, तपाईं बर्षभर एसईओ जम्मा गर्नुहुनेछ र प्रमुख मितिहरूमा शीर्ष स्थानहरूमा हुनेछ। अवश्य पनि, निश्चित गर्नुहोस् कि सामग्री सँधै सान्दर्भिक छ।
3. सामाजिक नेटवर्क को शक्ति को फाइदा लिनुहोस् । एक्सएनयूएमएक्समा गरिएको एक अध्ययन अनुसार, त्यस वर्ष त्यहाँ कालो शुक्रबार (नोभेम्बर 2017) को मुख्य मितिमा मात्रै सामाजिक नेटवर्कमा घटनाको 1.5 मिलियन भन्दा कम उल्लेख गरिएको थिएन। त्यसोभए निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको अनलाइन मार्केटिंग योजनामा ​​कुराकानीमा सामेल हुनको लागि विकल्पहरू समावेश छन्।
4. सिफारिसहरूको कार्यक्रम सुरू गर्नुहोस् । नीलसेनका अनुसार सिफारिसहरू डिजिटल विज्ञापनको रूपमा हुन् जसले बढी विश्वास उत्पन्न गर्दछ। यदि तपाईं आफ्ना सिफारिश कार्यक्रमहरू समन्वय गर्नुहुन्छ ताकि तिनीहरू कालो फ्राइडे र साइबर सोमबारको समयमा अधिक सक्रिय छन्, तपाईं आफ्नो पदोन्नतिहरूलाई थप बृद्धि दिनुहुनेछ।
5. काउन्टडाउन जोड्नुहोस् । तपाइँको उत्पादन पृष्ठहरु मा एक दृश्य खाता राख्नु अधिक रूपान्तरणहरु प्राप्त गर्न को लागी एक सरल र सुपर कुशल तरीका हो। तपाईं काउन्टडाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्रस्तावको कहिले घोषणा हुन्छ र अर्को कहिले यो समाप्त हुन्छ सूचित गर्न।
6. क्रस-बेच्ने अवसरहरूको फाइदा लिनुहोस् । कालो फ्राइडे र साइबर सोमबार मितिहरू छन् जसमा प्रयोगकर्ताहरूले बार्गेनहरूको लागि खोजी गरिरहेका छन्, त्यसैले उनीहरूको फाइदा लिनुहोस् कम मूल्यमा सम्बन्धित उत्पादनहरूको प्याकहरू सिर्जना गर्न।
7. फ्ल्यास बिक्रीको साथ उत्साह सिर्जना गर्नुहोस् । यो रणनीति कुञ्जी मिति अघि हप्ताहरूको लागि काममा आउँदछ। यो एक उत्पाद छ वा एक ठूलो छुट मा एक धेरै सीमित समय को लागी उत्पादन को एक सानो श्रृंखला को बिक्री को बारे मा छ। तपाइँको डिजिटल मार्केटिंगमा के आउने छ भन्ने एक सानो एपेटाइजर।
8. भिडियो विज्ञापन। तपाइँको अभियान मा साना विज्ञापन भिडियो बनाउन मा शर्त। तिनीहरू सार्वजनिकसँग राम्रोसँग जडान हुन्छन् र मानिसहरू उनीहरूमा हेर्ने बढी सम्भावना हुन्छन्। इन्स्टाग्राममा एक उपकरण छ जुन बल प्राप्त गर्दैछ र यसले हामीलाई युवा दर्शकहरूमा पुग्न मद्दत गर्दछ र अधिक नियमित रूपमा उपभोग गर्दछ, उदाहरणका कथाहरूमा।
9. जैविक कार्यहरू। हामी हाम्रो मार्केटिंग रणनीति को सबै कार्यहरू विज्ञापन हुनुपर्दछ, तर जैविक कार्यहरू सामाजिक नेटवर्कहरू, ब्लग, समुदायहरू र ब्रान्डको वेबसाइट मार्फत आवश्यक हुन्छ। हामीले सन्देशको छनौट गर्ने अभियानको सामग्रीहरू धेरै राम्रोसँग फैलाउनुपर्दछ, कीवर्डहरू, क्वालिटी छविहरू सहित, प्रत्येक प्लेटफर्मले प्रस्ताव गरेको एप्स र पूरक उपकरणहरूको फाइदा लिनुहोस् र धेरै राख्नुहोस्, तर हाम्रो सर्जनशीलता मार्केटरको रूपमा। सँधै उत्कृष्ट सामग्री सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्दछ जुन कालो शुक्रवार र साइबर सोमबारमा हाम्रा अनुयायीहरूलाई आकर्षित गर्दछ।
10। धेरै प्रकारका पदोन्नतिहरू सिर्जना गर्नुहोस्। जनवरीको बिक्रीलाई विचार गर्नुहोस्, जसले सामान्य शैलीलाई समान छुटमा राख्छ। बिभिन्न उत्पादनहरूका लागि बिभिन्न पदोन्नतिहरू लागू गर्नुहोस्। पनी उपभोक्ताहरू साझेदार हो वा होइन भन्नेमा निर्भर। उदाहरण को लागी, कपडा ईकॉमर्समा तपाईले 50% लाई चयनित कपडामा राख्न सक्नुहुन्छ 30% बाँकी कपडा बिना पदोन्नति, केवल सदस्यहरुका लागि, र 20% बाँकी कपडाहरूको लागि (यदि तपाइँ सदस्य हुनुहुन्न भने) ।
← इनबाउन्ड मार्केटिंगका लागि डाटा एनालिटिक्स: कुन मेट्रिक्स हेर्नु र किन
ईमेल मार्केटिंग: मुद्दाहरूको उदाहरणहरू जुन खोल्ने दर बढ्छ →